ဝက် (ဘ်) ဆိုဒ်များသည် Cron ဖြင့်စီစဉ်ထားသည့်အလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ | Martech Zone
ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်အစီအစဉ်များကို Cron ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်
တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 14, 2008 ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 22, 2012 Douglas Karr
လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပုံမှန်လည်ပတ်စေသည့်အလုပ်တွင်မလိုအပ်သောစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစနစ်များစွာရှိသည်။ အချို့သည်တစ်မိနစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ပြေးကြပြီးအချို့သည်သူတို့လုပ်နေသောအရာပေါ် မူတည်၍ တစ်ညတွင်တစ်ကြိမ်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ရက် ၃၀ အတွင်း ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုခဲ့သောဖောက်သည်များအားလုံးကိုကူပွန်တစ်ခုပို့ရန်တင်ပို့သော script တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်လိမ့်မည်။
ဤအရာအားလုံးကိုလက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်ရန်ကြိုးစားမည့်အစားအလိုအလျောက်စီစဉ်ထားပြီးလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသောအလုပ်များကိုလုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ Unix အခြေပြုစနစ်များတွင်၎င်းကို Cron ဖြင့်ပြီးမြောက်စေသည်။ သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့ရှေးရှေးသူငယ်ချင်းတွေအတွက်ငါကအချက်အလက်တွေထုတ်ပစ်မယ်ဆိုရင်ငါနဲ့စာဖတ်သူတွေကိုလွတ်လပ်စွာပညာသင်ပေးပါ။
ကံဆိုးပေမယ့်ပုံမှန် web developer သည် Cron နှင့်လုံးဝမရင်းနှီးပါ။ သူတို့ရှိရင်တောင် web hosting ကုမ္ပဏီတွေက Cron ကိုလက်လှမ်းမမှီဘူး၊ ကျွန်ုပ်၏အိမ်ရှင်သည်နောက်တစ်ခုဖြစ်သည် - သင့်ကို၎င်းကိုသင်ခွင့်ပြုသည်၊ သို့သော်သူတို့က၎င်းကိုမထောက်ပံ့ပါ။
Cron အဓိပ္ပာယ်ရှိဂရိစကားလုံး Chronos အတွက်အမည်ရှိ၏ အချိန်။ Cron သည် Crontab မှစုဆောင်းထားသောအလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်ရန်စဉ်ဆက်မပြတ်ကွင်းဆက်တစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်သည် tab ကိုulator ။ ထိုလုပ်ငန်းများကိုပုံမှန်အားဖြင့် Cronjobs ဟုရည်ညွှန်းပြီးသင့် site ရှိ scripts များကိုကိုးကားနိုင်သည်။
Cron ကိုအမှန်တကယ်လည်ပတ်ရန်ခက်ခဲခြင်းသည်စိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်လေ့လာသိရှိခဲ့ရာများနှင့်ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည် အစာစားလျှင်:
တွစ်တာကိုစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်ဇာတ်ညွှန်းကိုတင်လိုက်သည် API ကို မည်သူမဆိုမှ reply ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြည့်ရှုရန် @ifsuck။ ထိုမက်ဆေ့ခ်ျများကိုဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိကျွန်ုပ်သိမ်းဆည်းထားသည့်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အသစ်နှိုင်းယှဉ်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။
script အလုပ်လုပ်ပြီးသည်နှင့် User အတွက် script (744) ကို execute ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီး Cronjob file သို့ script reference ကိုထည့်သည်။ ထိုထက်နောက်မှပိုသည်။
ငါထို့နောက် SSH မှတဆင့်ငါ့ website သို့ login ခဲ့ရသည်။ Mac မှာ Terminal ကိုဖွင့်ပြီးစာရိုက်တယ် SSH username@domain.com ဘယ်မှာ username ငါအသုံးပြုချင်သော Username နှင့်ဒိုမိန်းဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိရာ။ ငါထို့နောက်အဘို့အသတိပေးခံရခြင်းနှင့်စကားဝှက်ကိုပေး၏ခဲ့သည်။
ထိုအခါငါ server ကိုအပေါ် filename နှင့်ဆွေမျိုးလမ်းကြောင်းကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့် command prompt ကိုမှတိုက်ရိုက် script ကို run ဖို့ကြိုးစားခဲ့: /var/www/html/myscript.php
ကျွန်ုပ်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီးသည်နှင့်ဖိုင်၏ပထမဆုံးစာကြောင်းတွင်လိုအပ်သော Unix ကုဒ်ကိုထည့်လိုက်သည်။ #! / usr / bin / php -q ။ ငါကဒီ script ကို execute လုပ်ဖို့ PHP ကိုသုံးဖို့ Unix ကိုပြောတာရိုးရှင်းပါတယ်။
Terminal command line မှာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တယ် ကွမ်းခြံကုန်း (အခြားသူများသည်စာရိုက်ရန်လိုအပ်နိုင်သည် crontab -e) နှင့်ရိုက်ထည့်ပါ ... နှင့်သောလိုအပ်သမျှပဲ!
သင်၏ Cronjob ဖိုင်အတွက် Syntax
အထက်ပါနံပါတ် ၂ နှင့် ပတ်သက်၍ Cron သည်သင်၏ scripts များမည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ပြီးစီးမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျွမ်းကျင်သောအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုသည်။ တကယ်တော့၊ ဒါကိုသင်အမှန်တကယ်ကူးယူပြီး Cronfile ထဲမှာကူးထည့်နိုင်တယ် / var / spool / cron / ထိုအမည်နှင့်ငါ၏အသုံးပြုသူအမည်အတူတူ) နှင့်အတူ။
# + —————- မိနစ် (၀ - ၅၉)
# | + ———- - နာရီ (၀ - ၂၃)
# | | + —— - ရက်လ (၁ - ၃၁)
# | | | + —— - လ (၁ - ၁၂)
# | | | | + - ရက်သတ္တပတ်၏နေ့ရက် (၀၆ မှ ၆) (တနင်္ဂနွေနေ့ = ၀ ၇ ရက်)
# | အ | အ | အ | အ |
အထက်ပါအချက်များသည်ကျွန်ုပ်၏ script ကိုမိနစ်တိုင်းတွင် execute လုပ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုတစ်နာရီလျှင်တစ်ကြိမ်သာလည်ပတ်စေလိုပါက၊ ကျွန်ုပ်သည်နာရီဝက်အကြာတွင်မည်သည့်အချိန်၌ run လိုသည်ကိုထည့်ထားပါလိမ့်မည်။
၃၀ * * * * /var/www/html/myscript.php
သင်ခွင့်ပြုချက်များကိုဤဖိုင်တွင် executable အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါ။ Terminal ၀ င်းဒိုးမှ syntax, permissions နှင့် crontab ကို execute သည်အရေးအကြီးဆုံးအချက်များဖြစ်သည်ကိုငါတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ဖိုင်ကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းသည့်အခါတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ခွင့်ပြုချက်များသည်ပြန်လည်စတင်ရန်လိုအပ်နေကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
UPDATE - အလုပ်များသေချာအောင်လုပ်လိုပါကနောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဒေတာဘေ့စ်အကွက်ကိုအဆင့်မြှင့်ရန်ဖြစ်သည်။ မကြာခဏဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါကသင်ကိုယ်တိုင်ပေးပို့လိုက်သောအီးမေးလ်ကိုကူးရေးရုံသာဖြစ်သည်။
အပိုဆောင်း Cron အရင်းအမြစ်များ:
Unix Daemon - ဒင်း Wilson
Cron ကို အသုံးချ၍ အလုပ်မည်မျှလုပ်နိုင်သနည်း။
Tags: biစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထောက်လှမ်းရေးဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာkeyword သိပ်သည်းဆသော့ချက်စာလုံးအသုံးပြုမှုseo အသစ်seo သေပြီလူမှုရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလူမှုရေးမြှင့်တင်ရေးရိုးရာ seo
dotservant.com ဝက်ဘ်ဆိုက် hosting
ဇန်နဝါရီ 15, 2008 မှာ 8: 21 AM
cron တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကောင်းစွာဖုံးကွယ်ထားသည့်ဆောင်းပါး၊ Crojobs အသစ်များအတွက် cron တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းမှာ cronjob ကွပ်မျက်မှုကြားကာလကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ cronjobs များသည်အချိန်အထိခိုက်မခံပါကအခြေအနေကိုပဲ့တင်ထပ်ရန်အတွက် script ၏အချို့သောကုဒ်များကိုထည့်သွင်းသင့်သည်။ သို့မှသာသင်သည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအခြေအနေကိုသင့်အားအသိပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီ 15, 2008 မှာ 8: 26 AM
ပထမတစ်ဒါဇင်လောက်အကြာတွင်သင့်တွင် UI တစ်ခု၊ ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုနှင့်အင်္ဂလိပ်ကြည့်နေသော syntax wish ရှိရန်ဆန္ဒရှိပါလိမ့်မည်
ဒုတိယအချက်မှာ cron သည်ယခင်အလုပ်၏ invocation ပြီးစီးသည်ဖြစ်စေ၊ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင်အလုပ်ကိုပစ်ခတ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်တစ်မိနစ်လျှင်တစ်မိနစ်လျှင် ၂ မိနစ်ခန့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်အတူတူပင်အလုပ်များစွာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- application ကို cron ကြည့်ခြင်းဖြင့်ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုအတွင်းသို့လည်ပတ်စေပါ၊ ဘာကို run ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်။ သင်လိုချင်သည့်အရာပေါ် မူတည်၍ တစ်မိနစ်သို့မဟုတ်တစ်နာရီလျှင်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ
- script တစ်ခုစီတွင် 'lock' ဖိုင်ကို / tmp ဖန်တီးပါ။ ၎င်းရှိပါကထပ်မံမစတင်ပါနှင့်၊ သင်အလိုမရှိပါကထပ်ခါတလဲလဲအလုပ်များကိုတားဆီးပါလိမ့်မည်။
- အကယ်၍ script သည်သော့ခတ်ထားသောဖိုင်သည် ၁ နာရီအထက် (သို့မဟုတ်သင်သေဆုံးသွားပြီဆိုလျှင်) ကိုရှာလျှင်အီးမေးလ်သတိပေးပါ
- တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားသည်ကိုသင်သိစေရန်အလုပ်ပျက်ကွက်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ အီးမေးလ်ပို့ပေးပါ
- သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနည်းနည်းလေးကျော်ပြီးကျော်လွန်သွားပါက Flux သို့မဟုတ် commercial schedulers ကဲ့သို့သောမူဘောင်များကိုကြည့်ပါ
ဇန်နဝါရီ 16, 2008 မှာ 11: 21 AM
ခရစ် - ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်! ငါမူကားထိုမူဘောင်များကိုကြည့်မည်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုအသုံးဝင်လိမ့်မည်။
ဇန်နဝါရီ 15, 2008 မှာ 10: 49 AM
Linux / Unix စနစ်အများစုတွင် crontab -e သည်သင်၏ crontab ကိုတည်းဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ သင်၏အိမ်ရှင် (Jumpline) သည်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းကိုအသုံးပြုနေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
15:2008 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 1, 58
Cronnie နဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့နေ့ကိုငါမှတ်မိသေးတယ်။ သူမအမြဲတမ်းအားကိုးအားထားပြုနိုင်ကြောင်း၊ သို့သော်သူမ၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးမှုရှိသည်ဟုသူမ၏အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ကြားခဲ့ရသည်။
ငါသူမအစအ ဦး ၌ငါ့ကိုပြီးပြည့်စုံသောနက်နဲသောအရာဖြစ်သကဲ့သို့ငါကမှန်ကန်ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမအကြောင်းအကြောင်းမေးပြီးတဲ့အခါသူမကသူဘယ်လိုလည်ပတ်ရတာကြိုက်သလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်စတင်ခဲ့သည်။ အခုတော့သူမဘဝမရှိဘဲတစ်နေ့သွားရမည့်နေ့ကိုစိတ်ကူး။ မရပါ သူမသည်သာမန်အားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးဝန်ထုပ်များကိုကျွန်ုပ်၏ပခုံးပေါ်သို့တင်လိုက်သည်။
အလေးအနက်ထားရလျှင် cron အလုပ်များနှင့်အလိုအလျောက်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အရာများကိုသာမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကုတ်ခြစ်ထားသည်ဟုခံစားရသည်။ သူတို့ကအမှန်တကယ် developer များရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ကြသည်။ သင်၏ဆာဗာကိုစီမံရန် CPanel ကဲ့သို့တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုလျှင်၎င်းသည် crons များကိုဖန်တီးရန် ပို၍ ရင်းနှီးသော interface ကိုပေးသည်။ သင့်အတွက် cron line ကိုတည်ဆောက်သည့်မိနစ်၊ နာရီ၊ နေ့၊ လစသည်တို့အတွက် drop down menu များကိုဖြည့်ပါ။
ဇန်နဝါရီ 16, 2008 မှာ 11: 41 AM
CPanel ကပြောင်းလဲလာပြီ။ ငါနောက်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့အချိန်က Windows 3.11 နဲ့တူတယ်။ 🙂
15:2008 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 6, 30
ဇန်နဝါရီ 16, 2008 မှာ 11: 39 AM